Manomboka amin'ny 'Halloween Kills' ka hatramin'ny 'Chucky,' Herinandro tsara indrindra ho an'ireo mpankafy mampihorohoro izy ity
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Manomboka amin'ny 'Halloween Kills' ka hatramin'ny 'Chucky,' Herinandro tsara indrindra ho an'ireo mpankafy mampihorohoro izy ity
by Waylon Jordan Oktobra 12, 2021
by Waylon Jordan Oktobra 12, 2021 4,359 hevitra
Sarotra ny hino fa efa ho antsasaky ny faran'ny Oktobra, fa ny fahafinaretana dia manomboka fotsiny ho an'ireo mpankafy mampihorohoro. Manana herinandro premieres andrasana herinandro mialoha izahay, ary ny olanay lehibe indrindra dia ny mitady izay hojerena sy oviana.
Nanomboka matanjaka ny andro tamin'ny fisokafan'ny vaovao niantsoantso tranofiara! Iray amin'ireo horonantsary nandrasana indrindra tamin'ny 2022 ny mahita an'i Sidney, Dewey, ary Gale niverina hanome ny fanampiany ho an'ireo niharam-boina vaovao voahodidin'ny Ghostface vaovao izay mety misy ifandraisany amin'ireo mpamono voalohany. Zahao ny tranofiara MANDRAKARIVA!
Fanombohana ihany ny tranofiara. Topazo maso ny zavatra andrasantsika indrindra amin'ity herinandro ity amin'ny lisitra eto ambany, ary ampahafantaro anay izay lohateny ho hitanao!
Chucky: Premieres talata 12 oktobra ao amin'ny Syfy sy USA amin'ny 10 ora alina ET
Tsy andrintsika izay hijerena ny saribakoly mpamono olona tianay amin'ity andiany vaovao ity avy amin'ny mpamorona franchise Don Mancini!
Synopsis: Premiere Episode: Rehefa mividy saribakoly Good Guy antitra amin'ny varotra eny an-tokotany i Jake Wheeler (Zackary Arthur) mpanakanto vao 14 taona, mpividy, amin'ny fikasana hampiasa izany amin'ny sary sokitra farany nataony, dia hiova mandrakizay ny fiainany tanora – ho tsara kokoa hatrany.
Fantatro izay nataonao tamin'ny fahavaratra farany: Premieres ao Amazon amin'ny 15 Oktobra
Ny lesona faratampony amin'ny loza ateraky ny tsiambaratelo nilevina, ny famerenana an-tsary ny tantaram-piainan'i Lois Duncan tamin'ny taona 1973 mitondra ny anarana mitovy amin'izany dia mitondra ny fientanam-po, mamono ary mangatsiaka hatramin'ny 2021 rehefa nisy vondrona tanora iray niharan'ny mpamono miafina iray taona taorian'ny nanaronenan'izy ireo lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tamin'ny alin'ny fizarana diplaoma.
ianao Andiany 3: Premieres amin'ny Netflix amin'ny 15 Oktobra
Ny vanim-potoana fahatelo amin'ilay andian-tantara momba ny zava-mahadomelina mampidi-doza dia mihatra amin'ny sehatra streaming amin'ny zoma miaraka amin'ity sinopsis manaraka ity:
Joe sy Love dia manambady ary mitaiza ny zanany lahy vao teraka, Henry, ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Madre Linda. Rehefa mihodina ny fihavanan'izy ireo dia manohy mamerina ny tsingerin'ny fieritreretana i Joe amin'ny fahalianana mitombo ao amin'i Natalie, ilay mpifanila vodirindrina aminy. Amin'ity indray mitoraka ity dia hamindra ilay script i Love mba hahazoana antoka fa ny nofinofiny hanana ny fianakaviana tonga lafatra dia tsy ho rovitra mora foana amin'ny hetsika henjana nataon'i Joe.
Mamono ny Halloween: Premieres amin'ny teatra sy amin'ny Peacock amin'ny 15 Oktobra!
Mazava ho azy fa tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny tantara mitohy ny toko farany Halloween saga amin'ilay sarimihetsika vaovao izay maka ny toerana tena misy ny taona 2018 Halloween najanona!
SYNOPSIS: Ny nofy ratsy dia tsy vita satria ny mpamono olona tsy hay tohaina Michael Myers nitsoaka ny fandrik'i Laurie Strode hanohy ny rà mandriaka nataony. Naratra ary nentina tany amin'ny hopitaly, niady tamin'ny alahelo i Laurie rehefa nanentana ny fanahin'ny mponina tao Haddonfield, Ill., Izy hiady amin'i Myers. Mandray an-tanana ny raharaha hAnds, ireo vehivavy Strode sy ireo sisa velona dia namorona andian'olona mpiambina hitady an'i Michael ary hamarana ny fotoana nampihorohoroany indray mandeha.
Fandripahana fety amin'ny torimaso: Premieres amin'ny Syfy ny 17 Oktobra amin'ny 9:00 alina ET!
Fety rendremana lasa mahafaty rehefa manapa-kevitra ny hamono ilay mpamono-drill mpanao herinaratra hanatevin-daharana ny famerenana / famerenana ny sarimihetsika 1982 toa mandresy an'ireo mpankafy mahatsiravina ankavanana sy ankavia.